Top 20 Artists Canada
Waxaa jira tiro ka mid ah fanaaniinta ee Kanada laga bilaabo guitarists, dhowna, pianists, fannaaniin iyo drumists. Dhammaan iyaga ka dhigi waxa ay qaadanayso in la soo saaro music, ha ahaato rock, jazz, Reggae, pop iyo hip-hop. Saamaynta cajiib ah music Badanaaba waxaa la socda Joojiya ah oo saamayn nasashada in ay dhagaystayaasha. Iskusoo wada duuboo, waxaa jira farriimo muhiim ah in la gudbo si muwaadiniinta siyaasad, diin iyo waxbarista moral. Kanada waa laga reebo lahayn; waxaa jira tiro ka mid ah fanaaniinta ee Kanada arrin, si kastaba ha ahaatee qodobkan isku dayi doonaa in aan ku muujiyo 20 ugu sareeya.
Hip 12.The Nasiibdarro
16. Broken Social Muuqaal
Download music free la TunesGo ka net
Waxa uu ammaanay badan oo ka mid ah taageerayaasha uu sida an "masterpiece unparalled of qoraal song". Farshaxankii waxa uu ku dhashay 1934, Westmount, Quebec, Canada. Isagu waa labada muusikiiste ah iyo Xisbi oo gabayadiisuna waxay ku salaysan yihiin diinta, siyaasadda iyo jinsiga. Farshaxankii helay a 'Princess of Award Australia ee sanadka 2011. Waxa uu si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Joni Mitchell waxa uu ku dhashay 1956 iyo waa heesaa Canadian ah, qoraa song iyo rinjiile ah oo si fiican loo yaqaan, Waayo, shaqada farshaxanka fiican. Qaar ka mid ah iyada heeso caan ah oo jira; "Big Yellow Taxi" iyo Woodstock ". Artist ayaa si togan u saamaysay fannaaniin kale oo la shaqayn jiray. Waxay ku guuleystay abaalmarinta Grammy iyada song sida waxqabadka Folk ugu fiican.
Neil Young ayaa ku dhashay bishii November 1945 ee Toronto Canada. Waa muusikiiste, Xisbi iyo ganacsadaha ah. Rock iyo Roll Hall of Fame ayaa isaga tilmaamay "mid ka mid ah dhagaxa weyn iyo duub dhowna weyn iyo qaab". Waxa uu si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Heart oo dahab ah
Oscar Peterson ahaa biyaaniiste Jazz Canada iyo laxamiistaha ah. Waxa uu ku dhashay on 15 August 1925. Waxaa lagu xasuustaa oo la ixtiraamo oo uu Jazz music sida uu sii daayay in ka badan 200 cajalado jazz, ku guuleystay abaalmarinta Grammy 8 iyo abaalmarino kale oo tiro badan iyo sharaf. Waxaa ka mid ah abaalmarinta kale waxa uu ku guuleystay ka mid ah: Juno Awards iyo Award Guddoomiyaha Guud ee jilitaanka. Waxa uu si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Waxaad u tagtaa madaxayga.
Stompin Tom Connors ahaa oo gabayaa ahaa, Xisbi iyo guitarist ah. Waxa uu tixgeliyo icon ah taageerayaasha uu Canadian ka mid ah. Waxa uu ku dhashay on February 9 1936 oo doortay music sida uu mustaqbalkiisa oo gabayadiisuna waxay ahaayeen xuddun muwaadiniinta Canada iyo meelaha. Waxa uu ku guuleystay lix Juno Awards, heleen waqti nolosha guul iyo waxaa sidoo kale ka dhigay sirkaal ah ee amarka ah ee Kanada. Waxa uu caan ku tahay gabayadii soo socda:
Song xeegada ayaa
Bud Spud ah
Ann Murray ku dhashay on June 20, 1945, waa gabayaa ahaa Canadian in pop music iyo music dadka waaweyn. Muusikaystayaasha bilaabay dhismaha mustaqbalkiisa iyada music by saameyn Cod pop helo. Waxay diiwaan guulo waa weyn tan iyo markii la inta badan iyada music iyagoo dusha sare ee shaxda in tiro ka mid ah dalalka. Waxay caan ku tahay ee ay walxuhu soo socda:
Waxaad u baahan tahay i
Danny ee song
Waxaan yeelan karaan qoob ka this
7. Arcade Naarta.
Arcade Naarta waa Koox dhagax weyn indie Canadian ku salaysan ee Montreal iyo ka kooban 6 xubnood. Waxaa la asaasay sannadkii 2001, waxa ay noqotay caan 2004 oo la sii daayo aaska album ay. Waxa uu ku guuleystay abaalmarinta oo ay ku jiraan 2 2011 Grammy ee album ee sanadka iyo Juno abaalmarinta ee album sanadka 2011. Band ayaa waxay caan ku tahay ee ay walxuhu soo socda:
My jirka waa shebeg
Kuwa agagaarkaaga jooga oo
Sarah Mclachlan waxa uu ku dhashay on January 28, 1968, in Halifax Nova Scotia, Kanada. Iyadu waa heesaa iyo gabaygayga qoraa Folk-Pop ah. Waxay si fiican u yaqaan for iyada music cajiib ah labadaba Kanada iyo kuwa caalamiga ah. Xirfadiisa Her music bilaabay da 'ah oo aad u jilicsan oo afar iyo goorna jacaylkeeda u music ayaa aragtay noqon guul. Waxay si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Aan idin Xusee
Alanis Morissette ku dhashay on June 1, 1974, waa Canadian American dhagax weyn oo gabayaa ahaa, guitarist, record soo saare iyo aktarada. Waxay ku guuleystay abaalmarinta 16 Juno, toddobada abaalmarinta Grammy oo loo magacaabay laba abaalmarinta Golden Globe. Waxay caan ku tahay ee ay walxuhu soo socda:
Waxaad ogaan oughta
Bryan Adams 'music sii wadaan in ay hogaanka u shaxda music dhagaxa ee Kanada la hits sida "Orod inaad," "Summer ee '69," iyo "jarid sida mindi," Waxa uu ku dhashay on November 5,1959 oo uu helay abaalmarino kala duwan oo ka mid ah: 20 Juno Awards, 15 abaalmarinta Grammy, TV iyo ASCAP, abaalmarinta American music Waxay caan ku tahay ee hits soo socda.:
Fadlan i cafi
Hadday saas tahay waan idiin sameeyo
Waa i kan
11. Mudanayaal Barenaked
Tani waa urur Canada dhagaxa weyn ka kooban afar fanaaniinta. The Xaakimkii barenaked la aasaasay sanadkii 1988, iyadoo labada ciyaaryahan ah Robertson iyo Stephen oo ugu danbeyn ku koray koox afar galay. Sababo la guutooyinkiisa oo qabadka fiican, waxa loo magacaabay for a abaalmarinta Grammy labaad ee 2001. Waxay si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Theme bang Big aragti
Hip 12. Waxaa murugo leh
Tan iyo duubida Canadian ka kooban yahay Gordon Downie, Paul Lanlois iyo Rob Baker. Waxay samaysteen kooxda loo 1983 iyo tan iyo weligeedba, ay la sii daayay qaar ka mid ah heesaha oo albums wixii aad aragteen oo iibin baxay riwaayada saaxadda yimaa-In Kanada inkastoo aan lagu guuleeysan in hogaanka gooldhalinta ku music ah. Waxay si fiican u yaqaan la hits soo socda:
New Orleans ayaa la taago
Ka hor kulanka ay qarni ah.
13. Baadiyaha Soundclash.
Soundclash Baadiyaha waa Koox Canadian oo la asaasay sanadkii 2001 wuxuuna ka kooban yahay saddex fanaaniinta. Band waa caanka ahaa ee Kanada ay qaab ciyaareed aad u fiican iyo sanadkii 2007 ay hal 'st Andrews' noqday lahayn. 1 saldhigga weyn ee dhagaxa weyn ku laayeen 102 ee ugu sareeya 30 tirec. Band ayaa waxaa si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Quluubtooda naxariis darada ah
Darbiyada uu hoos u dhaco
14. Blue Beverly
Blue Beverly waa Koox dhagax weyn dalka Canada la aasaasay 1984 in Toronto. Wuxuu ka kooban yahay 7 xubnood oo ay leeyihiin 13 daayo dhererka buuxa oo ay la socdaan albums Solo badan. Band ayaa muujiyey fiican ay induction in Music Canadian ah Hall of Fame inta lagu jiro Awards Juno ee 2012 iyo qaar ka mid ah gaari caan ah. Waxay si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Weli ma igu dhufteen
5 maalmood ee May.
Waxa asaasay 1993, Billy Talent waa Punk Koox dhagax weyn Canadian in jirey ka badan toban sano ka hor guul caadiga ah. Band ayaa ka kooban 4 xubnood oo tan iyo sanadkii 2001, waxa uu ku sameeyey 2 diiwaanka platina ee Kanada. Band ayaa hadda caan ku tahay gabayadii soo socda:
Ruujmobay ka roobka
Wax uu furo
Broken Social Muuqaal waa Koox Canadian indie la aasaasay sanadkii 1999 by Kelvin Drew oo Brendan Canning. Sannadkii 2002, waxay sii daayay album-aad ee waa hilmaameen in dadka oo ku guuleystay album kale oo ka mid ah abaalmarinta Juno sanadkii 2003. Waxa ay si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Michael durdurka ku dhashay 1951 ee Toronto, waa laxamiistaha guitarist Canada, hindisa, soo saare iyo music ah. Waxa uu caan ku tahay qaab riwaayad iyo oo loo magacaabay abaalmarinta Germany ah in 1996 ay shuqulkiisa u sameeyaan wax soo saarka iyo sidoo kale ku guuleystay abaalmarinta ASCAP sannadkii 2011. Waxa uu caan ku tahay ee ay walxuhu soo socda:
Charlie ayaa warqad soo dhaafay.
Michael Buble dhashay September 1975, waa heesaa Canada, qoraa song iyo jilaaga ah. Waxa uu ku guuleystay abaalmarino kala duwan oo ay ku jiraan afar abaalmarinta Grammy iyo abaalmarino badan Juno. Waxa uu caan ku tahay ee ay walxuhu soo socda:
Ma la kulmay weli.
Chilliwack waa Koox Canadian dhagax weyn in uu aad ugu firfircoonaa muddada u dhaxaysa 1979-1997. Oo waxay dhawreen 40 kali ah in in ay yihiin heer sare ah u dabaal taariikhda, laakiin waxa sida ugu fiican xasuustaa lix songs ugu weyn ee ay: i gabar, waxaan aaminsanahay, whatcha qeybiso ha, duuli habeenkii, la hadal waalan iyo lonesome Mary.
City Lights ahaa urur ah dhagaxa weyn American ka Ohio in la asaasay 2008. Waxaa wuxuu lahaa lix xubnood oo socday inta u dhaxaysa 2008- 2014. Waxay sii daayay 2 albums iyo siddeed kali oo waxaa loo dabaal taariikhda. Band ayaa waxay caan ku tahay soo socda hit gabayo lahaa,
Qabow iyo cirro
Bukaa waxaa ka mid ah
Eeg aad u sareysa
The Best Editor Tag Software 6 Audio Maanta Available
Top 50 Music Goobaha durdurka Music Online
> Resource > Music > Top 20 Artists Canada